Ukuhlolwa kokuguga kokugqwala - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukuvivinywa kokuguga okuvivinywa okunye okubizwa ngokuthi ukuhlolwa kwegumbi elinosawoti. Isivivinyo silingisa izimo zezulu ezahlukahlukene, umswakama ophakeme, ukugqwala okunolaka, izinga lokushisa eliphakeme lokuhlola ukumelana nokugqwala kwemikhiqizo noma izingxenye zensimbi. Lokhu kuhlolwa kusisiza ukuba sihlole ikhwalithi yemikhiqizo noma izinto zokwakha ukuze siqiniseke ukuthi umkhiqizo wethu uyakwazi ukufakwa ezimweni zezulu ezahlukahlukene ezinzima.
Siqhubeka nalokhu kuhlolwa kwimikhiqizo engezansi
-FTTH uphonsa ucingo ngocingo
-Aluminium LV ABC kubakaki bezintambo
-Amabhande ensimbi angenasici
Izesekeli zensimbi ezisebenzayo
Igumbi lokuhlola lenziwe ngaphambilini ngokuzenzakalela, elingagwema amaphutha abantu ukuqinisekisa ubuqiniso nokunemba kokuhlolwa. Isivivinyo silingisa eduze kwesimo sezulu sasolwandle lapho sinesithako esonakalisayo: i-sodium chloride futhi izolimaza okufakwa ensimbi. Lokhu kuhlolwa kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ekuhlanganisweni kwensimbi, njengezintambo zebhola lokungezwani, namagobolondo okuqina kwensimbi, izingxenye zensimbi zokuvalwa kwe-fiber optic splice.
Ukugqwala, izinga lokushisa, isilinganiso somswakama nesikhathi kunamanani ahlukile ngokuya ngamazinga EN 50483-4: 2009, NFC33-020, DL / T 1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi, kanye ne-IEC 61284 yekhebula le-fiber optic, nezinye izinsimbi.